यी अभिनेताले किन गरे डिभोर्स लिलामी ?::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
यी अभिनेताले किन गरे डिभोर्स लिलामी ?
अष्ट्रेलियाको सिड्नीमा शनिवार ओस्कार विजेता अनिेता रसेल क्रोभले लिलामी कार्यक्रमको आयोजना गरे । उक्त लिलामीको नाम राखिएको थियो – द आट अफ डिभोर्स ।
लिलामीका लागि जुन सामानहरुको सूची बनाइएको थियो, त्यसमा लामो फिल्मी करिअरका यादगर चिजहरु तथा निजी सामानहरु पनि थिए । मिडियामा यसलाई डिभोर्स लिलामीको नाम दिइएको छ ।
उक्त लिलामी अभिनेताको ५४ औँ बर्थडे तथा गायिका डेनियल स्पेन्सरसँग सन् २००३ मा भएको उनको विवाहको एनिभर्सरीको अवसरमा आयोजना गरिएको थियो । अभिनेता रसेल र गायिका स्पेन्सरबीच डिभोर्स भैसकेको छ र गतवर्ष दुईबीच डिभोर्सको कानूनी प्रक्रिया पूरा भयो ।
फेब्रुअरी महिनामा एक ट्विट गर्दै अभिनेता रसेलले आफुले धेरै सामानहरुबाट छुटकारा पाउन चाहेको बताएका थिए । त्यसमा एउटा घोडा, मोटरबाइक तथा मर्सिडिज कार पनि सामेल छन् । उनको एक भायोलिन १ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि बराबरको मूल्यमा बिकेको छ । उक्त इटालियन भायोलिन १२८ वर्ष पूरानो थियो । उक्त लिलामी कार्यक्रममा गायिका एलिसा नस्तेस्कीले ह्याप्पी बर्थडे गीत गायिन् र त्यहाँ उपस्थित मानिसहरुले अभिनेता रसेललाई शुभकामना दिए ।